५ बर्ष पछी मिल्दै छ यी ४ राशिलाई जीवनभर कहिले मिल्न नसकेको सफलता, कतै तपाइँ को राशी त परेंन ? हर्नुहोस – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/५ बर्ष पछी मिल्दै छ यी ४ राशिलाई जीवनभर कहिले मिल्न नसकेको सफलता, कतै तपाइँ को राशी त परेंन ? हर्नुहोस
प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा खुशी र प्रगतीमा ग्रहको राशिमा हुने प्रभावमा निर्भर हुने ज्योतिषशास्त्रको मान्यता रहेको छ। राह-केतुलाई ज्योतिषशास्त्रमा ज्यादै महत्वको साथ लिने गरिन्छ।ज्योतिष शास्त्रको अनुसार एक व्यक्तिमा राहु-केतुको नराम्रो प्रभाव रहेको अवस्थामा जोर्नी दुख्ने, सन्तान प्राप्तिमा रुकावट आउने, घटना-दुर्घटना बढ्ने, आर्थिक समस्या बढेर जाने आदि हुने गर्छ। ज्योतिष शास्त्रीहरुको अनुसार केहि समयमानै केहि राशिमा भएको राहु-केतुको नराम्रो प्रभाव घटेर जानेछ। जसको कारण निम्न उल्लेखित राशिहरुको जीवनमा ठूलै परिवर्तन आउनेछ।
कर्कट राशि : कर्कट राशि हुनेहरुमा रहेको राहु-केतुको नराम्रो प्रभाव हटेर जाँदा जीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन हुन सक्ला। धेरै समय देखि अड्किएका कार्यहरु फेरी शुरु हुनेछ भने आर्थिक लाभ पनि उल्लेख्य रुपमा प्राप्त हुन सक्ला। संग्रहित मनोकामना पनि पूरा हुनेछ। साथै स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुन सक्ला।
सिंह राशि : जीवनकै सबै भन्दा ठूलो सफलता मिल्न सक्लने हुँदा सिंह राशि हुनेहरुलाई असिमित खुशी मिल्नेछ। वैवाहिक जीवनमा मात्र नभई प्रेम जीवनमा पनि ठूलै सफलता हात लाग्ने देखिन्छ। धेरै समय देखि रहेको लफडा सकिने समय रहने देखिन्छ भने आर्थिक रुपमा पनि आय बढेर जान सक्ला।
मकर राशि : राहु-केतुको प्रभाव सकिनाले मकर राशि हुनेहरुलाई धेरै समय देखि रहेको सपना पूरा हुन सक्ला भने वैदेशिक यात्राको पनि स्थिति बन्ने देखिन्छ। अचानक धन प्राप्ति हुनाले खुशी मिल्नेछ। सन्तान प्राप्तिको समय पनि बन्न सक्ला। बिग्रिएका सम्पूर्ण सम्बन्ध सुधार गर्ने मौका मिल्नेछ।
वृश्चिक राशि : राहु-केतुको प्रभाव सकिनाले वृश्चिक राशि मान सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने देखिन्छ भने आफू माथि लागेको आरोप देखि पनि मूक्त हुने मौका मिल्नेछ। आर्थिक रुपमा मात्र नभई सामाजिक र पारिवारिक रुपमा पनि समय धेरै लाभदायक हुन सक्ला। नयाँ कार्य थालनीको लागि लगानी जुटाउन सफल हुने समय रहने देखिन्छ।
काठमाडौंमा १० दिनमा ४५० जनामा कोरोना संक्रमण, नाकामा कडाइ नहुँदा अवस्था भयाभह बन्दै, खै सर्तकता ?
अरिङ्गालको टो’काइबाट नेकपा अध्यक्षकी छोरीको निधन
डंडीफोरको दाग अनुहार भरी छ ? यसरी हटाउन सकिन्छ